Waa kuma weriyaha sannad ka hor xabsi ku dhex dhintay oo haatan qoyskiisa ogaadeen? |
Milateriga Cameroon ayaa waxa uu gaashaanka u daruuray eedo ah in weriye Samuel Wazizi uu u dhintay jirdil xabsiga loogu gaystay.
Bayaan uu ku saxiixan yahay afhayeenka wasaaradda Gaashaandhigga dalkaas, ayaa waxa uu ku sheegay in Wazizi uu u geeriyooday xaalad adag oo ka dhalatay difaaca jirkiisa oo isla isagii waxyeelaysay, laba todobaad kaddib markii la soo xiray.
Milateriga ayaa sidoo kale ku eedaynaya inuu ku lug lahaa arrimo argagixiso.
Warbixintaasi militariga ayaa ku soo beegmeyso xilli suxufiyiinta dalkaasi Cameroon ay ku hanjabeen shaqo joojin ay uga ashtakoonayaan geerida suxufigaasi oo ay sheegeen in la jirdilay oo uu arrintaasi u dhintay.
Qareenkka u doodayay Sam Wazizi ayaa sheegaya in suxufigaasi loo diiday in uu la xiriiro ama uu booqdo tan iyo markii la soo xiray 3-dii bishii Agosto ee sanadkii la soo dhaafay.
Warka ku saabsan geerida Wazizi ayaa soo baxay talaadadii dhaweyd balse warbixinta milatariga ayaa lagu sheegay in suxufigaasi uu dhintay muddo yar uun ka dib markii la soo xiray.
Warbixinta milatariga ayaa sidoo kale lagu sheegay in qoyska weriye Samuel Wazizi isla markiiba lagu wargeliyay geeridiisa oo dhacday 17-kii Agosto ee sanadkii la soo dhaafay ee 2019-ka.
Balse xubnaha qoyska Wazizi iyo qareenkiisuba waxay BBC-da u sheegeen in hadalkaasi uu yahay mid been ah oo aysan waxba ka jirin.
Warbixinta dowladda ayaa sidoo kale lagu sheegay in Samuel Wazizi uu la shaqeynayay dhawr kooxood oo argagixiso ah oo ka hawlgalayay gobolka ku yaal koonfur galbeed dalkaasi Cameroon.
Kooxaha xaquuqul insaanka iyo ururrada suxufiyiinta dalkaasi ayaa sheegaya in dowladda dalkaasi Cameroon ay caan ku tahay in ay cabburiso dadka dhaliilsan siyaasaddeeda, sidaa awgeedna weriye Wazizi loo xiray sababo la xiriira dhaliilahiisa ku qotonta qaabka dowladdu ay u maareynayso kacdoonka gooni u goosadka gobollada Af-Ingiriiska looga hadlo ee dalkaasi Cameroon.